Chii chiri 1990's cast of 'Flatliners' irikuita izvozvi, uye vanotaridzika sei?
musha Horror Varaidzo Nhau Ma1990's 'Flatliners' Cast: Vane Mabasa avo Akararama pane?
Ma1990's 'Flatliners' Cast: Vane Mabasa avo Akararama pane?
by Piper St. James June 17, 2017
yakanyorwa na Piper St. James June 17, 2017
Nezvinyowani Flatliners karavhani yenyowani yezita rimwe chete ichangoburwa, isu tinoshamisika kuti chii chakaitika kune vekutanga nhengo shanu kubva muna 1990 chitendero chekare? Basa ravo rakabudirira here, kana ivo vane… hongu, ndiri kuzozvitaura… zvakatsetseka?
Ini ndinofunga zvakachengeteka kutaura kuti tese tinoziva basa raKiefer Sutherland rakabudirira kurarama kubvira kuburitswa kwa Flatliners. Iyi bhaisikopo haina kuita kana kutyora basa rake, sezvo zita rake raizivikanwa pakati pevanyaradzi vemhando kubva kunzvimbo yake yekutamba muma1987 Vakarasika Vakomana sezvakaita vampire David. Nekudaro, iyo yakawedzera kune yake yakareba uye inonakidza kutangazve kweanonakidza uye eccentric mavara. Mumakore ese ema1990 Sutherland akatora chinzvimbo chakakura mumabhaisikopo mahombe, achienderera mberi nekukura basa rake. Hazvina kumbobvira zvave chero zvishoma pasi pemurume anotungamira, Sutherland akaenderera mberi nekuita nyeredzi mune yakakwenenzverwa yakakosha nhepfenyuro yeterevhizheni 24 iyo yairarama mwaka misere seSutherland yakaratidzira murume anotungamira Jack Bauer. Yekuwedzera 12 episode mini nhepfenyuro yakamutswa makore mana mushure mekupedzwa kwemwaka wake wekupedzisira. Iwe unogona ikozvino kuona Sutherland paABC's Akasarudzwa Anopukunyuka mune chinzvimbo cheMutungamiriri weUnited States mushure menguva yematsutso ichi sezvo ichienderera mumwaka wayo wechipiri pane network yekudonha mutsara.
Julia Roberts airatidzika kunge asina kunge akura kubva pamazuva ake paseti ye Flatliners, kana basa rake. Kuzivikanwa muHollywood nekuda kwebvudzi rake dzvuku dzesango, rakakura kupfuura hunhu hwehupenyu, uye kugona kukuru kwekuita, nyeredzi yakanga yatove neGolden Globe pasi pebhandi rake kubva Sirimbi Magnolias paakazobatana nevatambi veiyo sci fi / inotyisa bhaisikopo. Mumakore ese ema1990 nehafu yekutanga yemakore gumi akatevera aive mutambi wepamusoro weHollywood aibhadharwa, saka zita rake kuwedzerwa kune sci fi / horror cult classic zvirokwazvo haina kukuvadza. Kubva iye Flatliners Mazuva aave kungowedzera kubudirira nebasa rake remamuvhi kusanganisira mazita akadai se Mona Lisa Smile, Erin Brockovich, uye Edya Nyengetera Rudo. Sarudzo dzake dzekuita hadzina kumbomupepeta kune rimwe basa kana mhando, uye sarudzo dzake dzinoramba dzichimuchengetedza. Munguva pfupi yapfuura Roberts akazivisa chirongwa chake chekutanga cheterevhizheni icho chichaonekwa paHBO gare gare chirimo chino chakanzi Nhasi zvichave Zvakasiyana, yakavakirwa kunze kweMaria Semple inova yemusoro iwoyo zita.
Kevin Bacon saDave Labraccio
Kevin Bacon anofanirwa kuve chikamu chemwari-mwari kuti atarise uyu mudiki kwenguva yakareba! Kunyangwe achitora akura zvakanyanya uye anogutsikana akapfuma mabasa anoratidzira kupfuura kungoonekwa kwake kwakanaka, zvinoita kunge haasati achembera kubvira kwake Flatliner mazuva. Bacon akatanga basa rake nemabhaisikopo ayo airatidzira kwake nyore kuenda uye comedic hunhu. Aive neakatanga kupinda mukati National Lampoon's Animal House, asi ndokuitevera pamwe nediki diki mabasa mune terevhizheni sipo opera. Kusvikira muna 1984 apo mutambi wechidiki akazoita yake yekutanga kubuda mukati Netsoka, firimu yakazova box office yegoridhe. 1990 raive gore rakakura reBacon mune sci fi / horror genre seese ari maviri Flatliners uye Kutuka vakasunungurwa.
Genre mafeni akakurumidza kumubatanidza nekutanga kwake 1980 kuoneka kwekutanga NeChishanu iyo 13th firimu uye hauna kukanganwa zita rake kubvira. Muchokwadi, havasi vanhu vazhinji vakambozviwana. Basa rake rakaputika zvakanyanya uye mabasa ake amuunza mukusangana nevazhinji vatambi pamhando dzese dzemitambo iyo trivia mutambo 'Matanhatu matanhatu aKevin Bacon' akagadzirwa.
Kuve nehukama hukuru kune chinotyisa uye sainzi fikisheni yemhando, Bacon akataura mu2015 angafarire kudzokera ku Kutuka kodzero.
Akazvarwa mumhuri yeBaldwin zvaive zvakafanorongerwa William aizove mukurumbira, asi mutambi uyu akatanga kuwana mavambo ake saCalvin Klein modhi. Flatliners waive mufananidzo wake wechipiri mukuru, unova wakanaka kunyatso kufunga nyeredzi yese yaakateedzera pamwe nayo yaive yatosimbiswa. Akazoenda kumamovie senge Kudzokera kumashure naKurt Russel uye sirivha na Sharon Stone, iyo yakamutorera iyo MTV Movie Mubairo weMurume Anonyanya Kukosheswa Murume. Akazotamira kune sci fi thriller Virus naJamie Lee Curtis. Mazuva ano Baldwin anga achirovera kutenderedza terevhizheni yetv achiita zvirongwa zvakaita se Hawaii Five-0 pane CBS uye kubatana-nyeredzi pane 30 Dombo pamwe chete nemukoma wake Alec.
Zvakawanda saiye -ye-nyeredzi William Baldwin, panguva ya Flatliners Oliver Platt aisazivikanwa sevamwe vake vatatu-nyeredzi; Sutherland, Bacon, uye Roberts. Chiitiko chake chekare mumafirimu chaive chakaganhurirwa, asi akatanga kuvaka uye kutora fomu mumakore anotevera. Akatora mabasa ayo ese ari maviri anoshamisa senge ari Nguva Kuuraya, pamwe neaya anga achiwedzera kusimba, sehunhu hwake mu Lake Placid. Akazogamuchira kurumbidzwa kwakanyanya nebasa rake reterevhizheni raRussell Tupper pa Huff iyo yakaburitsa 2004-2006. Kupatsanura basa rake pakati pemabhaisikopo, terevhizheni, uye kunyangwe Broadway, Oliver Platt aigara achiwana nzira yekuchengetedza zita rake. Iwe parizvino unomuona sehunhu hwaDr Daniel Charles pane akawanda terevhizheni anoratidza mu Chicago PD zvakasikwa zvinosanganisira; Chicago PD, Chicago Fire, Chicago Justice, uye Chicago Med.
Which imwe yeaya mavara apfuura achadzokera ku Flatliners sequel, verenga nezvazvo pano! Iyo Flatliners sequel ichaburitswa n theatre Gunyana 27, 2017.
Ine rudo rwezvinhu zvese zvinotyisa uye mhosva yechokwadi, Piper anogara achigara achinyora nezvazvo. Wedzera runako rwe make up, fashoni, uye mamwe mararamire uye iwe une uyu munyori akaboora. Unogona kuwana zvinyorwa zvake paHorror.com nezve zvinotyisa uye nyowani Yechokwadi Mhosva chikamu chaakasarudzwa kuti atungamire,.
Mifananidzo Mitsva Yakaburitswa Kubva Kunouya Kane Hodder Zvinyorwa!
Kutsvaga Jobho? Mhuri Inoda Inogara-MuNanny Kune Yavo Haunted Imba